Summit Construction Corporation waa adeeg buuxa shirkad guriga iyo caadadii guryaha dhismaha cusub adeegaya Virginia Beach, Chesapeake iyo Suffolk, Virginia. Tan iyo markii ay 1981 aan lagu go'an in ay guryo cusub oo tayo leh dhismaha, waayo, dadka degan degaanka Tidewater iyo Hampton Waddooyinka ah.
xiriirka shakhsiga ah iyo xusuus abuuro waa waxa aan qiimeeyo ugu. Summit ogyahay maal-dareenka aad qabto in aad guriga iyo waxaan halkan si uu kaaga caawiyo samaynta dhab ah gurigaaga cusub. Sida abaalmarinta ku guuleystay khubaro maxalli ah qoysaska of our u gaar ah, waxaynu og nahay sida aad muhiim u ah guriga run ahaantii waa. at Summit, si xor ah u Dream Waxaad tahay. Kooxda Our Design waa qayb ka mid ah Experience shirkii, waxaan kaa caawin doona inaad Customize model kasta oo ku haboon oo riyooyin iyo baahiyaha qoyskaaga aad. Tan iyo markii ay 1981 waxaan ku qiimeeyo xidhiidhka aannu la yeelanay dadka guryaha leh our. Waxaa naga go'an tahay in la dhiso guri ee ugu tayada sareeya, qiimaha iyo fiiro gaar ah u faahfaahsan ...Home A ku jeclaan doonaa Living In.